Umhlaba weSirius - I-Airbnb
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguΧρήστος
"Umhlaba weSirius" ulele encotsheni yenduli, kwindawo ye-10.000 square metres, ecaleni kweLake laseKorissia kunye kufuphi nolwandle lwaseChallikounas. Sakhe i-villa yokuqala ye-bioclimatic ukuze uphumle uzihlaziye kwaye unxibelelane ngokuthe ngqo nendalo yendalo yeNdawo yeNatura.
Uhlaza olusemhlabeni luyinzalelwane ubukhulu becala, neentlobo ngeentlobo zezityalo nemithi.
I-Villa ye-100 square metres inamanqanaba amabini anika ubumfihlo kunye noxolo.
Kwinqanaba lokuqala kukho igumbi lokuhlala elinendawo yomlilo, lixhotyiswe nge-Home Cinema kunye ne-Satellite TV, igumbi lokutyela kunye nekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye nesitya sokuhlamba izitya. Ngapha koko, kukho iWC kunye negumbi lokulala elinebhedi elingana neKumkanikazi, ibhokisi ekhuselekileyo kunye nekholamu yayo yeshawa-hydromassage.
Kwinqanaba lesibini, kukho igumbi lokulala elikhulu elinebhedi elingana neKumkanikazi, iofisi, igumbi lokuhlambela elivulekileyo elibandakanya iJacuzzi, iTV yeSatellite kunye neebhalkhoni ezimbini ezinkulu, ezibonelela ngombono omangalisayo macala onke.
Zonke iindawo zangaphakathi zinemeko yazo yomoya.
Indawo ejikeleze le villa ibonelela ngedama lokuqubha, ishawari yelanga, ibarbeque enendawo yayo yokutyela, indawo yokuhlala yangaphandle kunye neebhedi zelanga.
I-villa yethu isebenzisa inkqubo yokucocwa kwenkunkuma yebhayoloji, isebenzisa ngakumbi amanzi akhutshiweyo kwinzuzo yezityalo, ngaloo ndlela isebenza ngokuhambelana nendalo eyingqongileyo.
Amanzi edama lokuqubha acocwa kusetyenziswa ityuwa ye-electrolysis, ukugcina ichibi licocekile kwaye lilungele indalo.
Ngenxa yentlonipho yokusingqongileyo, i-villa ikubonelela ngemigqomo yenkunkuma eyahlukileyo yokuphinda isetyenziswe, i-compost, njl.
Isifudumezi-manzi selanga sibonelela ngamanzi ashushu ngamaxesha onke.
Jabulela usuku lwakho ukususela kusasa, kunye nelanga eliphuma ngaphezu kweentaba ze-Epirus, de lize lingene kubukhulu bolwandle.
Ukuhamba ngeenyawo kunye nokukhwela ibhayisekile: Lo mmandla ubonelela ngeendlela ezingenakubalwa, ezikhokelela kwimithi yomnquma engapheliyo, intaba yasePantokratoras enezityalo zayo ezintle, amahlathi amakhulu e-oki kunye nembonakalo entle ye-Corfu esemazantsi, kunye nehlathi lomsedare lase-Issos, umsebenzi wobugcisa bendalo kunye. Ii-ecosystems ezahlukeneyo ezisi-7.
Ngaphandle kokuba yiNdawo yeNatura, izityalo kunye nezilwanyana zihlala zikwincopho yazo, indalo ibonelela ngayo yonke into ngesisa.
Imisebenzi yoLwandle: Unxweme olunesanti lwase-Chalikounas, oluziikhilomitha ezi-3 ubude, lolona khetho lwakho lukufutshane (kumgama oyi-1,5 km kuphela). Ulwandle lunebhari, lufanelekile kwi-wind-surfing kunye ne-kite-surfing, lubabalwe ngokuhlukahluka kwendalo ngenxa yeLake yaseKorissia elele ngqo ecaleni kwayo, kwaye kubathandi bobunqunu, indawo esemazantsi yolwandle yeyona ndawo ifanelekileyo. Ezinye iilwandle onokuzifumana zikufuphi kakhulu yi-Issos -for nudists ngokunjalo-, Prasoudi kunye neParamonas.
Lala kunxweme lwabo olunesanti ecocekileyo, qubha kumanzi aluhlaza kwaye uvumele i-aura yolwandle ikugqithise.
Imbali - INkcubeko: Abathandi bembali kunye nembali banokutyelela iNqaba yaseByzantine yaseGardiki, iPalaeolithic Cave kunye nedolophana yaseAgios Matthaios, yonke into ekude kwi-villa.
Eminye imisebenzi ibandakanya ukuloba nokukhwela amahashe.
Ekupheleni kosuku lwakho olugcweleyo, zivuselele kwi-jacuzzi, ivumba elijikeleze umoya ngeoyile ye-ethereal kunye neentonga ezinevumba elimnandi, ujonge ukutshona kwelanga okuhle ngayo yonke imibala yayo emangalisayo.
Emva kobumnyama, unokuhlala kwiibhalkhoni ezinkulu kwaye wonwabele isibhakabhaka esiqaqambileyo, kubandakanya neGalactic Path etyhilekayo kwiinkwenkwezi zeenkwenkwezi, umboniso wokwenyani.
Indawo yokutyela yaseAlonaki
Umbuki zindwendwe ngu- Χρήστος
A man who loves peace, nature, good music and good company. I like trekking, cicling, snorkeling. My famous hobby is to making structures and DIY in the Land.
Siyavuya kakhulu ukunceda kunye nokunxibelelana.
Ungasitsalela umnxeba nangaliphi na ixesha, kwaye kwezinye, siya kuba sinakho kangangoko sinakho.
Inombolo yomthetho: 00000631342
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Chalikounas